टेलिकमको अबको प्राथमिकता इन्टरनेट विस्तार गर्नु हो – Janaubhar
टेलिकमको अबको प्राथमिकता इन्टरनेट विस्तार गर्नु हो
प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस ३०, २०७१ | 194 Views ||
– विकलकुमार श्रेष्ठ (कार्यालय प्रमुख)
दूरसञ्चार कार्यालय, घोराही दाङ
नेपाल टेकिलमले अहिले कस्तो सेवा प्रदान गरिरहेको छ ?
नेपाल टेलिकमले अहिले साधारण टेलिफोन ल्याण्डलाइन, मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । हामीले इन्टरनेट सेवाअन्तर्गत जीपीआरएस र थ्रिजी सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । त्यसैगरी वाइमेक्स सेवा पनि शुरु भएको छ । सीडीएमएमा भ्वाइस सर्भिस सेवा सञ्चालन भएको छ भने ल्याण्डलाइन फोनबाट एडीएसएल सेवा प्रदान भइरहेको छ ।
तपाईंका सेवाग्राहीहरु कति छन् ?
नेपालका जुनसुकै स्थानबाट भए पनि सिम निकालेर मोबाइल चलाइरहेका हाम्रा सेवाग्राही हुन् । घोराही सेवाअन्तर्गत हामीले कात्तिकसम्म ल्याण्डलाइन फोन ३ हजार ५ सय १७ वटा वितरण गरेका छौं । जीएसएम प्रिपेड १ लाख ९१ हजार ३ सय ३० वटा र पोस्पेडमा ४ हजार ७ सय ४६ वटा सीम वितरण गरिएको छ । स्काइ प्रिपेड २६ हजार ३ सय ५५, स्काइ पोष्टपेड ६ सय ६४, सीडीएमए प्रिपेड ३ हजार ८ र सीडीएमए पोष्पेडका १० जना ग्राहक रहेका छन् । इन्टरनेट सेवाअन्तर्गत एडीएसएलका १ हजार ४ सय ८४ र वाइम्याक्सका ३ सय ३२ जना सेवाग्राही रहेका छन् । यो शाखाअन्तर्गत कुल २ लाख २३ हजार ९ सय ७७ सेवाग्राही रहेका छन् ।
अन्यको तुलनामा जीएसएम प्रिपेडका सेवाग्राही बढी देखिए किन होला ?
जीएसएम प्रिपेडको मूल्य सस्तो र सुविधा राम्रो भएकाले यसका ग्राहक बढी भएका हुन् । त्यसैगरी इन्टरनेट चलाउनको लागि पनि जीएसएममा सहज भएकाले पनि ग्राहक बढी भएका हुन् ।
तर, जीएसममा केही ठाउँमा फोन नलाग्ने गुनासो सुनिन्छ त ?
हामीले कुनै पनि स्थानको आवश्यकताको आधारमा बीटीएस टावर बनाउँछौं । स्थानीय जनताले निवेदन दिएको खण्डमा प्राविधिक मूल्यांकन गरेर अझै पनि त्यस्ता ठाउँछन् भने बीटीएस टावर स्थापना गर्न सकिन्छ । केही स्थानमा त्यस्तो गुनासो आएको होला । वेव सिस्टमबाट चल्ने भएकाले केही स्थानमा त्यस्तो समस्या परेको होला । तर, अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि बस्तीमा फोन नलागेको भनेर गुनासो सुनेका छैनौं । केही गहिरो र तथा बस्ती नभएको स्थानमा त्यसो भएको हुन सक्छ ।
अहिले महसुल संकलनको अवस्था छ ?
केही वर्ष पहिलेसम्म टेलिफोनको महसुल तिर्न टेलिकम कार्यालयमा नै आउनुपर्दथ्यो । सेवाग्राहीको सहजताका लागि अहिले रिचार्ज कार्ड सिस्टमबाट काम भइरहेको छ । हामीले तथ्यांकमा महसुल बढेको खासै देख्न सकिदैन ।
बीटीएस टावर थप्ने कुनै योजना छैन ?
दाङको लोहारपानी र स्यूजामा एक महिनाभित्र बीटीएस टावर बनाउने योजना छ । जीएसएम अन्तर्गत दाङ र प्यूठानमा ४३ वटा र सीडीएमका १२ वटा टावर रहेका छन् । अब दाङमा ८ वटा र प्यूठानमा ५ वटा बीटीएस टावरको प्रस्ताव गरिएको छ । यी बाहेक दाङमा ३ वटा र प्यूठानमा १ वटा गरेर ४ वटा बीटीएस टावर निर्माणको तयारीमा रहेका छन् ।
अबको तपाईहरुको प्राथमिकता के हो ?
हाम्रो प्राथमिकता भनेको फोन नपुगेको ठाउँमा पु¥याउने र सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने नै हो । अहिलेको जमाना भनेको इन्टरनेटको हो । हामीले आम सेवाग्राहीलाई इन्टरनेटको पहुँचमा पु¥याउन चाहन्छौं । थ्रीजी सेवा बिस्तार हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ भने वाइमेक्स सेवा पनि सबै ठाउँमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । अब छिटै थ्रीजी सेवाका लागि बीटीएस टावरहरुमा प्रविधि जोडिने छ ।
तपाईहरुले प्रदान गर्ने धेरै सेवाको बारेमा सेवाग्राहीलाई नै थाहा छैन त ?
तपाईले भन्नुभएकोमा केही सत्यता छ । केही कुराहरु हामीले गरेर पनि प्रचार गर्न सकेका छैनौं । जस्तै जीएसएममा अहिले न्यूनतम ३ सय ७२ रुपैयाँमा मासिक पैसा खर्च गर्नुपर्छ । यसमा प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ २५ पैसा लाग्छ । सेवाग्राहीले तीनवटा नम्बरमा सेटिङ मिलाएपछि प्रतिमिनेट ५५ पैसामा कुरा गर्न सक्छन् । उनीहरुले एफएनएफ सेवाअन्तर्गत एफएनएफ टाइप गरेर स्पेस दिई तीनवटासम्म मोबाइल नम्बरहरु १४ सयमा एसएमएस गरेपछि यो सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सीडीएमए नाइट कल सुविधा पनि रहेको छ । यो सुविधा सीडीएमएका सेवाग्राहीहरुले नाइट टाइप गरेर १४१५ मा एसएमएस गरेपछि एक महिनासम्म बेलुकी १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म २० रुपैयाँमा कुरा गर्न सक्नेछन् । अहिले हामीले विभिन्न दुई स्थानमा हट स्पट सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । आगामी पुसभित्र अन्य थप ४ स्थानमा हट स्पट सेवा प्रदान गर्ने योजना रहेको छ ।
हटस्पट सेवा भनेको के हो ?
हटस्पोट सेवा भनेको इन्टरनेट सेवा हो । हामीले आगामी पुसभित्र चार स्थानमा सञ्चालनका लागि सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रविधि काठमाडौंबाट नेपालगञ्जसम्म ल्याइसकेका छौं । एक साताभित्रै सम्पूर्ण उपकरण दाङ ल्याइनेछ । पहिलो चरणमा धेरै भीडभाड हुने स्थानहरुमा हटस्पट सेवा शुरु गर्न लागिएको हो । नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत स्याटलाइट सेवा निर्देशनालयले यो सेवा शुरु गर्न लागेको हो । अब राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र घोराहीको दामोदरचोकमा यस्तो सेवा शुरु गर्न चालेका छौं । यसअघि दूरसञ्चार कार्यालय र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस परिसरमा यो सेवा शुरु भइसकेको छ ।
हटस्पट सेवाअन्तर्गत सेवाग्राहीले १० रुपैयाँमा एक घण्टा नेट चलाउन पाउनेछन् । इन्टरनेट चलाउन सकिने मोबाइल सेटबाट नमस्तेको प्रिपेड तथा पोष्टपेड र स्काइ सिम प्रयोग गरी यो सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीले वाइफाइ टाइप गरेर १४१६ मा एसएमएस गरेपछि टेलिकमबाट यूजर नेम र पासवर्ड प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरुले सो यूजर नेम तथा पासवर्ड २४ घण्टासम्म प्रयोग गर्न पाउनेछन् । २४ घण्टा पछि पुनः अर्को एसएमएस पठाउनुपर्छ । २४ घण्टाभित्र सेवाग्राहीले १० रुपैयाँमा एक घण्टा नेट चलाउन पाउनेछन् । २४ घण्टाभित्र सेवाग्राहीले जुनसुकै समयमा पनि नेट उपयोग गर्न पाउने छन् । हटस्पट सेवामा नेट निकै छिटो चल्नेछ ।
यो सेवाअन्तर्गत २ सय ५६ केवीपीएसको गतिमा नेट चल्नेछ । अहिले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा उपलब्ध भएको थ्रीजी सेवामा न्यूनतम १ सय २८ केवीपीएस गतिमा नेट चलिरहेको हुन्छ । हटस्पट सेवा थ्रीजी सेवाभन्दा करीब दुई गुणा बढी गतिमा चल्नेछ । एक स्थानमा कम्तिमा २ सय ५० जना सेवाग्राहीले नेट चलाउन सक्नेछन् । २ सय ५० भन्दा बढी सेवाग्राहीले एकै स्थानबाट नेट चलाउन थालेमा यसको गतिमा केही कमी आउनेछ । धेरै भीडभाड हुने ठाउँहरु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन् । आगामी दिनहरुमा जिल्लाका सम्पूर्ण गाविसमा हटस्पट सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना रहेको छ । हामीले यसअघि जिल्लामा जीपीआरएस र थ्रीजी सेवा शुरु गरिसकेका छौं । थ्रीजी सेवा शुरु भएका स्थानहरुमा जीपीआरएस सेवा लगभग विस्थापित भइसकेको छ । सेवाग्राहीहरुले सस्तो र तीव्र गतिमा नेट प्रयोग गर्न चाहेकाले हामीले क्रमशः आफ्ना सेवाहरु पनि थप्दै गएका छौं । टेलिकमले हाल सीडीएमएमा इभिडियो र ल्याण्डलाइन फोनमा एडीएसएल सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
Prevपहिलोपल्ट जहाजमा | दीपक घिमिरे
Nextजुकाहरु | घनश्याम अस्तित्व